Nezvedu - Linsu Environmental Dziviriro Chinyorwa Co., Ltd.
"Giqiu" uriri ndohwaJehovha muchiso Linyi Linsu kwezvakatipoteredza kuchengetedzwa zvinhu Co., Ltd. kambani unyanzvi pakutsvakurudza uye kukura, kugadzirwa, rokutengesa uye basa chete unhu läpinäkyvä epurasitiki uriri akatevedzana zvigadzirwa. Iyo ine yega yekutsvagisa Institute, rabhoritari, yekugadzira fekitori, uye yakakwana mhando yekuonekwa system.
Kubva pane huzivi hwebhizinesi hwe "mhando, mhando uye sevhisi", iyo kambani inotungamira pasainzi uye tekinoroji uye inoita hunyanzvi hunyanzvi , yakamira mazana mazana mazana matanhatu emamirimita, gumi neshanu yezvigadzirwa uye anopfuura mazana mana emhando dzemavara, kusangana nezvinodiwa zvakasiyana, zvekurapa, zvekudzidzisa, zvekufambisa, zvemitambo, dzimba dzekuratidzira nezvimwe.
Iyo kambani yakapasa 3C certification, ISO9001 yemhando yepamusoro sisitimu sisitimu, TUV Rhine kuGerman mune-yakadzika yekuongorora chirimwa Zvese zvigadzirwa zvedu zvakapfuura SGS yepasi rose kuyedzwa kuyedzwa, kusanganisira kupfeka kusagadzikana, antiskid, murazvo-unodzora, isiri-o-benzene, formaldehyde nezvimwe zvigadzirwa zvekambani nemhando yayo yepamusoro, kuita kwakanakisa uye yakakwana mushure-yekutengesa sevhisi system yave ichizivikanwa zvakanyanya uye anovimbwa nevatengi kumba nekune dzimwe nyika.
Yedu inokwanisa timu yeinjiniya inowanzo kuve yakagadzirira kukushandira iwe kuti ubvunze uye nekupa mhinduro. Isu tinokwanisa zvakare kukununura nemahara emahara sampuli kuzadzisa zvaunoda. Nhanho dzakanakisa dzinogona kuitwa kukupa iwe sevhisi yakanaka uye zvigadzirwa. Kune chero munhu anofarira kambani yedu uye zvinhu, ndapota taura nesu nekutitumira maemail kana kutibata nesu ipapo. Kuti tizive mhinduro dzedu uye kuronga. ar zvimwe, unogona kuuya kufekitori yedu kuti uone. Isu tichaenda kunogamuchira vaenzi vanobva kutenderera pasirese kukambani yedu.